होमपेज / शुक्रबार / पोखरेली अनुको मस्ती
पोखरेली अनुको मस्ती	04 May 2013 २१ बैशाख, २०७०
Be the first to comment! 12345 (6 votes)
यो हप्ता पोखरेली मोडल अनु गुरुङको तस्बिर शुक्रवार ब्लोअपमा प्रकाशित भएको छ। भुपाल गुरुङको तस्बिरमा यमु गुरुङले शृङ्गार गरेकी छन्। Tweet Leaveacomment Message *
पत्रकारिताका गुरुका नजरमा शुक्रवारप्रा. पी खरेलमेरो विचारमा नेपालबाट प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिकाहरूमध्ये विविधता, लेखनशैली, चित्र प्रयोगका हिसाबले शुक्रवार अब्बल पत्रिकामा पर्छ। बजारमा थुप्रै पत्रिका स्थापित भइसकेको अवस्थामा शुक्रवार प्रकाशनमा आएको थियो। सिलिकन भ्यालीबाट : कहाँ पुग्ने? स्मार्टफोनमै हेर्नुस्सानफ्रान्सिस्को जाने कि साक्रामेन्टो? गिलरोय जाने कि लस एन्जलस? मोबाइल फोन या ट्याबलेटमा भएको गुगलम्यापमा हेर्दै त्यसअनुसार घरबाट निस्किँदा भनेकै समयमा पुग्न सकिन्छ।	स्टेज चढ्न चाहन्छ 'नेक्स्ट'कुरा वर्षदिनअघिको हो। नेपाली संगीत क्षेत्रमा नयाँ ब्यान्ड थपिएको थियो। यही कुराको जनाउ दिन ब्यान्डले आफूहरूको नामै 'अर्को' अर्थात् 'नेक्स्ट' राख्यो। 'खुब नाम सोचियो त्यो बेला,' ब्यान्डका संस्थापक सदस्य सुशान्त...	भत्किँदो घरबारबाबु र छोराको बोलचाल छैन। दाजु र भाइ अदालत पुगेका छन्। श्रीमान् र श्रीमतीले छुट्टिने बाहेक अर्काे विकल्प भेटेका छैनन्। नेपाली परिवारको संरचना र स्वरूप बदलिँदो छ। पारिवारिक विखण्डन तीव्र...	उपमा अलङ्कार र प्रेमसूत्र–गाउँले बलदेव
हाम्रा पूर्वजहरू उपमानको सहारा लिई वर्ण चिनाउने वा चिन्ने गर्थे। गाईको जस्तो गोडा= गाईगोडा। गाईगोडे ग। यहाँ गाईको जस्तो उपमान र गोडा चाहिँ उपमेय हो। गाईगोडे विशेषण हो र...	स्टन्टमा पोख्तअभिनेत्री हेमा श्रेष्ठबारे बजारमा अहिले के सुनिन्छ भने उनी स्टन्टमा कुनै हिरोभन्दा कम छैनन्। म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्दै आएका मिलन चाम्सले निर्देशन गरेको 'हँसिया' मा अभिनय गरेकी हेमाले उक्त फिल्ममा...	गजबकी शीलाउमेर उकालो लाग्दै गए पनि जाँगरमा कमी नआएको देखाइदिएकी छिन्, अभिनेत्री प्रिया रिजालले। एनबी महर्जनले निर्देशन गरेको फिल्म 'सकस'मा उनले आइटम नम्बरमा ठुम्का लगाएकी छिन्। छोटो पहिरन लगाएर उत्तेजक भंगीमा...	'स्टेजकै कारण जिउँदा हामी'चर्चित गायक राजु लामा अमेरिका बस्छन्। आफूलाई मंगोलियन हार्टसँग जोडेर मात्र चिनाउँछन्। युवापुस्तालाई उनका धेरै गीत कण्ठ छन्। गाउन भनेपछि जतिसुकै सानो कार्यक्रममा पनि पुगिदिन्छन् उनी। एल्बम बिक्री शून्य भएका...	शुक्रबार	'शृंगारले आत्मविश्वास बढाउँछ'शृंगारमा प्रयोग हुने फेसियल प्रोडक्ट 'आस्टाबेरी'ले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउँदै आएको छ। भारतीय उत्पादन आस्टाबेरीको...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा...	भर्खरै...